Investment Banking. Ukutshalwa kwezimali noma ukubhenka ngebhizinisi | Ezezimali Zomnotho
Indawo ye-Investment Banking ingenye ehlanganisa ukufakwa komhlaba wonke kwezinkampani ezinkulu, izimali zengqalasizinda, izimali ezizimele, izikhungo zezezimali, imali yokuzibandakanya, abakhiphi bomphakathi namabhange, kanye ukuhlanganiswa nokutholwa kwamathimba kanye nezimakethe ezinkulu zezimali.
Ukutshalwa kwemali noma ukubhenka ngebhizinisi, Inesibopho sokuthola izimali zokuxhasa amaphrojekthi otshalo-mali athile omhlaba wonke kumakhasimende awacelayo, ngokukhishwa nokuthengiswa kwamasheya wemali engaguquguquki futhi eguquguqukayo ezimakethe ezinkulu. Investment banking inikeza okuhlukile izinhlobo zezeluleko kuzo zonke izinqubo namalungelo okuhlanganiswa kwenkampani kokufanayo, ekutholakaleni kwenkampani ngenye, nakwamanye amaqoqo amakhulu ezezimali.
Amabhange Okutshalwa Kwezimali e-United States, bajwayele ukugxila ekuhwebeni nasekukhipheni izibambiso, njengezitoko, futhi abamukeli imali eqondile evela emphakathini noma abanikeze noma isiphi isikweletu. E-UK, Amabhange Abathengisi enza umsebenzi ofanayo, kepha, ngokungafani namabhange otshalo-mali e-United States, Amabhange Abahwebi enza imisebenzi yendabuko yasebhange, ukwamukela imali evela kumakhasimende ajwayelekile futhi ubanikeze imali mboleko nezinye izinsizakalo.
Lapha eSpain, imakethe yasebhange lokutshala imali ibilokhu ilawulwa yizinhlangano zakwamanye amazwe, imelika uqobo.
1 Ezinye zezinsizakalo ezinikezwa yibhange lokutshala imali
2 Ukwelulekwa ngokomsebenzi
3 Ezinye zalezi zinsizakalo ze-Investment Banking
4 Kungani iSpain idinga i-Investment Banking?
5 Izinzuzo ze-Investment Banking
6 Ezingeni lezezimali zeNkampani, kunezinsizakalo ezahlukahlukene
7 IMISEBENZI YESIKWELETU:
8 ISIKHUNGO SENHLOKO:
9 ISELULEKO SESICWANGCISO
Ezinye zezinsizakalo ezinikezwa yi ukutshalwa kwezimali ebhange
Ukukhulisa imali: Phakathi kwayo kukhona imisebenzi ye-Underwriting, okuwukukhishwa nokufakwa kwamasheya azimele, i-Project Financing, okuyiyo yokuxhasa amaphrojekthi, ukuxhasa amaphrojekthi ezempilo yomphakathi kanye nokulawulwa kokungcola, imakethe yesibili yokubambisa, ukudala nokubhalisa izinkampani, imali yokuqalisa ibhizinisi, ukuthuthukiswa kwamaphrojekthi wokwakha nokuxhasa ngezimali izinhlobo ezahlukene zemithombo yemvelo.
I-Capital Management nayo yenziwa: okungukuphathwa kwephothifoliyo yamasheya aphethwe yimali yempesheni, ama-trust, izimali zikahulumeni kanye nokutshalwa kwemali kwabantu ngabanye, izinhlelo zokutshala imali, ukuphathwa kwamapulazi.
Ukuphepha, ukuphathwa kwamasheya ezimakethe zamasheya, amaphepha wemali engaguquki kanye nezinketho zokuhlela amasu wokumiswa nokuphathwa kwephothifoliyo yakho.
Ukuthuthukiswa kwenkampani, njengokuthengwa komunye nomunye, kuhlangana phakathi kwabo, amasu ezinkampani, ukuhlela umbono wezezimali nezifundo zemakethe.
Izeluleko zokutshala imali, izinzuzo zentela zokuhlelwa kwezezimali.
njengezimpahla zomuntu siqu.
Izimakethe zemali nezimali ezinkulu
Ukuhweba ngamasheya ajwayelekile, amasheya akhethwayo namabhondi ohlobo lwenkampani
Kunokuthengiselana okuningi nezinsimbi zezezimali ongazisebenzisa ukuthola izinsiza ozidingayo. Ukukhethwa kwalezi zinsimbi kuncike ezidingweni ezithile maqondana nenhlokodolobha, inani nesikhathi sokutshalwa kwemali esidingekayo, ukusebenza nokusebenza ngokomthetho kwenkampani noma iphrojekthi ephakanyisiwe, izintshisekelo zabafakizicelo nabanye abaningi. wokuthengiselana okulungile kwakho. Ngakho-ke, Izinsizakalo ezinikezwa yi-Investment Banking zenzelwe ukuphendula kuzo
izidingo ezithile ezithile zezezimali.
Ezinye zalezi zinsizakalo ze-Investment Banking
Ukuxhasa Imisebenzi Emisha Ngezimali
Ukulinganiswa kwezezimali kwenkampani
Ukuhlelwa kabusha kwezezimali kwenkampani
Ukuhlanganiswa Nokutholwa Kwezinkampani
Ngemininingwane edalulwe phambilini, kungabonakala ukuthi I-Investment Banking ayisebenzi nje kuphela njengomxhumanisi phakathi komtshali zimali nenkampani, kunalokho, yi-ejenti eyaziwayo edala isakhiwo esivele sikhona ebudlelwaneni bezohwebo futhi evumela ukuthengiselana ukuthi kwenziwe noma ukutholwa kwemali eyinhloko.
Kungani iSpain idinga i-Investment Banking?
Ukutshalwa kwemali kuyinjini yokuqhubeka komnotho wezwe, kuze kufike ezingeni lapho livumela izinkampani ukuthi zenze amaphrojekthi amakhulu ukuze ziqhubeke nokukhula kwazo kanye nokuqiniswa okuqinile ezimakethe, kanti futhi, ukutshalwa kwemali kukhiqiza inani elikhulu lezinsizakusebenza zoMbuso ukwenza izimali eziningi ezandisa ukuncintisana kwezwe, njengoba kanye inhlalakahle yomphakathi. Ngale ndlela, i-Investment Banking igqugquzela ukuhamba kwemali okuhlukahlukene kanye nezinsizakusebenza ezinkampanini, kanye nokufaka isandla ekuthuthukisweni kwamabhizinisi okuhlangene ezweni kanye nenqubekela phambili yalo kwezenhlalo nezomnotho.
Ibhange lezentengiselwano lithandwa kakhulu phakathi kwezakhamiziLokhu kwenziwa ngamagatsha asebhange ajwayelekile. Ibhizinisi eliyinhloko lalokhu, liqukethe ukukhokhela imali efakwa amaklayenti abo nokukhokhisa izikweletu abazinikeza abantu. Umehluko phakathi kokukhokhisa nsuku zonke nalokho okukhokhayo kufanele ube muhle, ngoba lokhu kuyinzuzo yakho eyinhloko.
Kulokhu kuvame ukungezwa okunye uhlobo lokwenziwe njengamakhadi esikweletu, ukudluliswa kwemali, iziqinisekiso, izinhlelo zempesheni, amakhomishini ezimali zokutshala imali, izeluleko zemakethe yamasheya, phakathi kokunye.
I-Investment banking, esikhundleni salokhu okushiwo ngenhla, izinikele kakhulu ekukhipheni izinkampani iStock Exchange, ihlanganisa izinkampani, yakhele futhi isebenzise ama-OPA, yenza ukuthengiswa kwesahluko sonke phakathi kwezinkampani, kukhishwe amabhondi, kuqhuba imisebenzi yokuhweba ezimakethe zezimali zamanani amakhulu kakhulu, phakathi kokunye okuningi. Ayinayo inethiwekhi enkulu yamagatsha, kepha igxila emisebenzini yayo emahhovisi amakhulu ambalwa, ukwenza lula izinqubo nezinqubo.
Izinzuzo ze-Investment Banking
Izinzuzo ezinikezwa yibhange lezentengiselwano zizinzile impela, okusho ukuthi, zehluka kakhulu. Kunzima kakhulu ukuthi amabhange ezentengiselwano angene ekulahlekelweni ngaphandle uma kunenkinga yezomnotho emhlabeni jikelele. Uma ezweni amabhange ezentengiselwano eqala ukulahlekelwa yimali, kuba nenkinga ephelele.
Kunalokho, izinzuzo ezinikezwa yibhange lokutshala imali ziyahlukahluka kakhulu. Ezikhathini zomnotho ezithelayo, ukutshalwa kwezimali ebhange kuthanda ukuthola imali eningi kakhulu kunaleyo ekhiqizwa yibhange lezentengiselwano, kepha ezindaweni ezithile zokwehla, ukonga kwebhange lokutshala imali kuthanda ukwehla ukwehla okukhulu kwenzuzo yalo futhi kuze kufinyelele ekulahlekelweni njalo.
Nini ukutshalwa kwemali ebhange kusesimweni sokulahlekelwaAkusho ukuthi izwe lishonile noma lisenkingeni. Lokhu kujwayelekile ezikhathini ezingazelelwe zokwehla kokugeleza komnotho ezimakethe zomhlaba.
Tshala imali ku-Banco Popular, isibonelo, kuhluke ngokuphelele ekutshaleni imali kuMerrill Lynch, noma ngabe zombili zaziwa njengamabhange. ESpain awekho amabhange amaningi okutshalwa kwezimali amsulwa. Amanye amabhange amakhulu aseSpain, afana ne-Santander ne-BBVA, anezigaba ezinikezelwe kubhange lokutshala imali, kepha mancane ngosayizi uma kuqhathaniswa nokuphelela kokusebenza kanye nokwehlukana kulawa mabhange.
Futhi, Uhlobo lwebhange lokutshala imali elenziwa yilaba, alinabungozi kangako futhi aluhambi kancane kunelamabhange otshalo-mali e-United States. Kungakho izikhundla zokuhweba eziphethwe ngamabhange aseSpain zinengozi ephansi kakhulu uma kuqhathaniswa nalezo zamabhange aseMelika.
Umtshali-zimali kufanele acabange kahle ngamabhange ezentengiselwano namabhange otshalo-mali njengezinhlobo ezimbili ezihluke ngokuphelele zezinkampani eziwusizo lwezezimali, nokwazi ukusebenzisa yomibili imiphumela emnothweni webhizinisi oqinile.
Ezezimali ze-GBS kuyisibonelo sebhange lotshalo-mali elasungulwa ngo-1991 futhi nangaphezulu kweminyaka engama-25 yesipiliyoni, i-GBS Finanzas inezindawo ezimbili eziyinhloko zomsebenzi wezezimali:
Ezezimali Zenkampani: Okubandakanya konke okuphathelene nokuhlanganiswa kwenkampani, ukuthengwa kwezinto zokusetshenziswa, izimakethe ezinkulu kanye nezeluleko ngezikweletu.Ihhovisi Lomndeni: Uphethe izeluleko eziphelele zezindawo ezinkulu.
Abalingani be-GBS nengxenye enkulu yochwepheshe abasebenza lapho, banolwazi olunzulu ezikhungweni zamazwe omhlaba, ezingeni lokuqala njengeFirst Boston, iGoldman Sachs, iCredit Suisse, i-UBS Warburg, iDeutsche Bank, iBhange laseMelika, kanye nakumafemu amakhulu abameli. kanye nokucwaningwa kwamabhuku.
Ezingeni lezezimali zeNkampani, kunezinsizakalo ezahlukahlukene
Ukuhlelwa kabusha kwamasheya enkampani
Imisebenzi evikelekile efana ne-LBOs, MBOs, MBIs, njll.
Ukuhlukaniswa nokutholwa kwezinkampani
Ukuhlanganiswa noma ukuhlanganiswa kwamasheya ebhizinisi
Basekela ngezeluleko nangokuxoxisana ngezixazululo zokuthola imali ezimele yokusebenza kwezinkampani:
Ukubolekwa kabusha kwemali mboleko
Ukuvikela amabhidi wokuthatha
Ukulungiswa kwezinkampani ezophumela obala (pre-IPO)
Ukuhlelwa kabusha kwebhizinisi kanye nemifelandawonye yamasu:
Ingxenye ebalulekile yazo zonke izinkampani zaseSpain okwamanje Kubhalwe ku-Stock Exchange kukhona amaklayenti we-GBS Finanzas anjengeTelefonica, i-Gamesa, i-Almirall, i-Repsol, i-Endesa, i-Iberdrola, i-Abertis, i-Ebro Foods, i-OHL, i-Sacyr, i-ACS, i-Indra, i-Inmobiliaria Colonial, njll.
El imodeli yokusekela neyokweluleka i-GBS Finanzas eyibize ngeHhovisi Lomndeni icacile, ilula, isobala futhi isemhlabeni jikelele. Ngokuyisisekelo, okufunwayo ukugcina inhlokodolobha yabatshalizimali nokwenza ngcono ukwakheka kwezimali zabo ngaphandle kwezwe lapho imali yabo ifakwa khona.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Imikhiqizo yezezimali » Ama-akhawunti asebhange » Investment Banking